सोमबार जन्मिएका व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
काठमडौँ, ३० मंसिर । मानिसको आफ्ना आफ्नै स्वभाव हुन्छन् । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार व्यक्ति कुन बार जन्मिएको हो त्यसमा पनि...
जामियाका विद्यार्थीको ट्विट गल्तीले लाइक गरेँः अक्षय कुमार
एजेन्सी, ३० मंसिर । मोदी सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा भारतभर प्रदर्शन भइरहेको छ । आइतबार भारतकै प्रमुख...
रिसाउँदा शरीरमा पर्छ यस्ता ८ असर, रिसमा नियन्त्रण पाउन यसो गर्नुस् !
रिसको प्रभाव अरुलाई परोस् वा नपरोस्, रिसाउने व्यक्तिलाई भने अवश्य पर्छ । त्यो पनि नराम्रो असर । त्यसैले भनिन्छ, क्रोध मानिसको...
यस्तो छ रुस र चीनलाई जोड्ने पहिलो ‘रेलवे ब्रिज’ (भिडियोसहित)
एजेन्सी, ३० मंसिर । रुस र चीनलाई जोड्ने बहुप्रतिक्षित ‘रेलवे ब्रिज’ (रेल पुल) आगामी वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुँदैछ...
तपाईंका बच्चा पनि गणितमा कमजोर छन् र !
एजेन्सी । सामान्यतः धेरै बालबालिकाहरु गणितदेखि डराउँछन् । उनीहरुलाई हिसाब भनेपछि तनाव नै हुन्छ । यसर्थ, हिसाब भनेपछि टाढै...
पुँजीवाद र साम्यवाद एउटै रुखका दुई हाँगा हुन्
पुँजीवाद र साम्यवादलाई एकअर्काको विकल्प ठान्ने मानिस संसारमा धेरै छन् । उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दिको वैचारिक ध्रुवीकरण यही...
तुम्बाहाङ्फेनै सभामुख हुनुपर्ने संघीय सांसदको धारणा
काठमाडाैं, ३० मंसिर । संघीय संसदका सांसदले उपसभामुख डा. शिबमाया तुम्बाहाङ्फे नै सभामुख हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आइतबार...
हृदयाघातका कारण चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईको निधन
काठमडौँ, ३० मंसिर । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईको गए राति हृदयाघातका कारण निधन भएको छ । उनी ५२ वर्षको थिए । वैवाहिक...